Dragon City Ningabizi kugula Tool - lomnqweno yimfumba obububo
EyeKhala 11, 2018	off	by exacthacks
malungaisixeko sedragoni umdlalo:
Molo Bafana! Wamkelekile umva kwi post yam entsha leyo malunga Dragon City nse kugula Tool 2019. Lo mdlalo womnatha sezentlalo umbhekisi phambili kwaye umvakalisi yingongoma lwentlalo. Kuyinto umdlalo Iyamangalisa yaye abantu bayakuthanda ukudlala on Facebook, Android kanye iOS amaqonga.
Uyakwazi nje malunga ndwa ngayo ukuze ubone umxokozelo Android google ukudlala 4.6 ukukala. Yiloo 100 abasebenzisi million ukudlala lo mdlalo kuphela Android.
Kufuneka ezinye izinto ezikhethekileyo ukunandipha mdlalo ngokupheleleyo ezifana Gold, Food, Gems and more. Kodwa kukho kancinane izinto ekruqulayo okanye zibiza ukuba ezi zibonelelo. Nguwe kuphela ungafumana emva udlala ixesha elide okanye kufuneka uthenge zonke ezi zibonelelo usebenzisa ikhadi lakho lokuthenga ngetyala.
Ungakhathazeki siyazi ukuba kutheni na apha site yam [ExactHacks.com]. Ukuba ufuna nyani zizame Gold mda, Food, Gems, Level kunye Dragons uze ufunde onke inqaku uze umxokozelo.
Malunga Dragon City nse kugula Tool 2019:
Okunene sifumene amakhulu izicelo Dragon City Amagugu kugula, thina ngoko ke thabatha isigqibo ukuba bachithe ixesha ukwenza loo nto ngenye isixhobo. Ngoku sikulungele ukupapasha ukuba wenze yakho Dragon City Game lula ngakumbi kodwa sijabulile.
Lo mdlalo uya kuba kukunika ixesha onzima na ngakumbi ngenxa yokuba unalo ithuba ukongeza zonke izinto ezifana:
My Imali Unlimited zegolide Dragon City Game
My Imali Unlimited Of Ukutya e Dragon City Game
Kwakhona my Imali Unlimited Of Gems e Dragon City Game
Unako kwakhona my inqanaba neempungutye ekuqaleni komdlalo ngaphandle kokuchitha imali yakho okanye ukuchitha ixesha. Uya kuba nako ukufumana zonke ezi zinto kunye ononqakrazo olumbalwa le mouse.
ayikwazanga Ngokuqinisekileyo nawe ube ukukhathazeka malunga naluphi na uhlobo ingozi efana “do you have to purchase this Dragon City Hack Tool 2019” okanye “ifayile ukhuselekile kulo naluphi na uhlobo lwegciwane, malware”. Emva koko kufuneka waneliseke ukuba uyazi ukuba uyakwazi download free Dragon City Ningabizi lomnqweno yimfumba Tool akukho uphando okanye ngaphandle yokuqinisekisa abantu. Ngoko ke le app ngqo nge elula ngokucofa kanye.
Dragon City Gems kugula Tool 2019 kufundiswe:
Emva kokufunda inqaku ngokupheleleyo uya kuba nako ukusebenzisa le Dragon City kugula 2019 lula. Njengoko usazi ukuba kufuneka ube esi sixhobo download lomnqweno yimfumba ngezantsi ikhonkco kwi PC yakho okanye indlela Mac. Ngoko ukuyifaka emva ukucatshulwa ifayile zip uvule.
In Inyathelo 2 kufuneka ufake imali enkulu imiba kwaye kwiplagi isixhobo yakho oyisebenzisayo. Uya ngokukhawuleza ukuqhagamshela idivayisi yakho. Nje ukuya kwicandelo isicwangciso kwaye ukhethe zonke iindawo zokhuseleko. Okokugqibela cinezela le “Faka kugula” iqhosha kwaye alinde de ekugqibeleni inkqubo ngenye.
Qala Dragon City Umdlalo kwaye Ndonwabe nabahlobo bakho.
CategoryAndroid kugula Facebook kugula imidlalo iOS kugula